Yohane 14 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
14 “Ningazivumeli iintliziyo zenu zikhathazeke.+ Bonisani ukholo kuThixo,+ bonisani ukholo nakum.+ 2 Endlwini kaBawo zininzi iindawo zokuhlala.+ Kungenjalo, ngendinixelele, ngenxa yokuba ndiyemka ndiya kunilungiselela indawo.+ 3 Ukuba ndiyemka ndize ndinilungiselele indawo, ndiya kuza kwakhona+ ndize ndinamkelele kum ekhaya,+ ukuze apho ndikhoyo mna nibe lapho nani.+ 4 Nalapho ndiya khona niyayazi indlela.” 5 UTomas+ wathi kuye: “Nkosi, asazi apho uya khona.+ Siyazi njani na indlela?” 6 UYesu wathi kuye: “Ndim indlela+ nenyaniso+ nobomi.+ Akukho bani uzayo kuBawo ngaphandle kokuza ngam.+ 7 Ukuba benindazile mna, ngenimazile noBawo; ukususela ngalo mzuzu kuse phambili niyamazi yaye nimbonile.”+ 8 UFilipu wathi kuye: “Nkosi, sibonise uYihlo, yaye oko kwanele kuthi.” 9 UYesu wathi kuye: “Bendikunye nani ixesha elide kangaka, ukanti, Filipu, akukandazi na? Lowo undibonileyo mna umbonile noBawo.+ Kwenzeka njani na ukuba wena uthi, ‘Sibonise uYihlo’?+ 10 Akukholelwa na ukuba mna ndimanyene noBawo yaye uBawo umanyene nam?+ Izinto endizithethayo kuni andizithethi ngokuphuma kum; kodwa uBawo omanyene nam wenza imisebenzi yakhe.+ 11 Ndikholelwe ukuba ndimanyene noBawo yaye uBawo umanyene nam; kungenjalo, kholwa ngenxa yemisebenzi ngokwayo.+ 12 Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ubonisa ukholo kum, naye lowo uya kwenza imisebenzi endiyenzayo; yaye uya kwenza imisebenzi emikhulu+ kunale, ngenxa yokuba ndiyemka ndiya kuBawo.+ 13 Nakuphi na oko nikucelayo egameni lam, ndiza kukwenza, ukuze uBawo azukiswe ngoNyana.+ 14 Ukuba nicela nantoni na egameni lam, ndiza kuyenza. 15 “Ukuba niyandithanda, niya kuyigcina imiyalelo yam;+ 16 ndiza kumcela uBawo yaye uya kuninika omnye umncedi wokuba kunye nani ngonaphakade,+ 17 umoya wenyaniso,+ lowo ihlabathi lingenakuwufumana,+ ngenxa yokuba lingawuboni yaye lingawazi. Nina niyawazi, kuba uhleli nani yaye ukuni.+ 18 Andiyi kunishiya nilahlekelwe.+ Ndiyeza kuni. 19 Selisondele ixesha lokuba ihlabathi lingabi sandibona,+ kodwa nina niya kundibona,+ ngenxa yokuba ndiyaphila yaye nani niya kuphila.+ 20 Ngaloo mini niya kwazi ukuba ndimanyene noBawo yaye nani nimanyene nam ibe nam ndimanyene nani.+ 21 Lowo unemiyalelo yam aze ayigcine, nguye ondithandayo.+ Lowo undithandayo uya kuthandwa nguBawo, yaye nam ndiya kumthanda kwaye ndiya kuzibonisa ngokucacileyo mna kuye.” 22 UYudas,+ ingenguye uSkariyoti, wathi kuye: “Nkosi, kwenzeke ntoni na le nto uzimisele ukuzibonisa ngokucacileyo kuthi kungekhona kulo ihlabathi?”+ 23 Ekuphenduleni uYesu wathi kuye: “Ukuba nabani na uyandithanda, uya kuligcina+ ilizwi lam, yaye uBawo uya kumthanda, ibe siya kuza kuye size sihlale naye.+ 24 Lowo ungandithandiyo akawagcini amazwi am; kwaye ilizwi enilivayo asilolam, kodwa lelikaBawo ondithumileyo.+ 25 “Ngoxa ndisahleli nani ndizithethile ezi zinto kuni. 26 Kodwa umncedi, umoya oyingcwele, lowo uBawo aya kumthumela egameni lam, yena uya kunifundisa zonke izinto aze anikhumbuze zonke izinto endinixelele zona.+ 27 Ndinishiyela uxolo, ndininika uxolo lwam.+ Andininiki ngendlela yokunika kwehlabathi. Mazingakhathazeki iintliziyo zenu, zingarhwaqeli ngenxa yoloyiko. 28 Nivile ukuba ndithe kuni, Ndiyemka, kodwa ndiya kuphinda ndibuyele kuni. Ukuba benindithanda, beniya kuba nemihlali kukuba ndisimka ndisiya kuBawo, kuba uBawo mkhulu+ kunam. 29 Ngoku ke ndinixelele ngaphambi kokuba kwenzeke,+ ukuze, xa kusenzeka, nikholwe. 30 Andisayi kuba sathetha okuninzi nani, kuba umlawuli+ wehlabathi uyeza. Kwaye akanandlela yakubambelela kum,+ 31 kodwa, ukuze ihlabathi lazi ukuba ndiyamthanda uBawo, kwananjengoko uBawo endinike umyalelo+ wokwenza, ndenjenjalo. Sukumani, masihambe sisuke apha.